Biyaha Niilka: Ma miino muddaysan oo mar uun geeska ku qarxi doontaa? | Gaaroodi News
Biyaha Niilka: Ma miino muddaysan oo mar uun geeska ku qarxi doontaa?
July 19, 2020 | Published by: Tifaaftiraha
Biyo-xireenka Webiga Niil ay ka dhisanayso Itoobiya
Waxaa marba muddooyinkan u danbeeyey isa soo tarayey muranka ku saabsan biya-xireenka ballaaran ee ay webiga Niilka ka dhisanayso dowladda Itoobiya, kaas oo sannadihii u danbeeyey marba heer soo gaarayey.
Wadammada ay mashaqadani dhextaallo ee Itoobbiya, Masar iyo Suudaan ayaa u muuqda kuwo aan weli xal rasmiya gaarin.
Dalka Itoobbiya waxa uu kal hore dhistey biyo-xireen weyn oo lacag badani kaga baxday, kaas oo ah ubucda ismariwaagani uu ka dhashay.
Buuxintiisuna waa waxa keliya ee haatan aanan lagu heshiin, taas oo horseedi karta isku dhac dalalkaas ka dhex abuurma.
Masar iyo Itoobbiya ayaana ah labada quwadood, ee sida gaarka uu muranku uga dhexeeyo.
Muxuu yahay dowrka madaxweynaha Eritrea?
Isaias Afwerki, Madaxweynaha waddanka Eritrea, ayaa muddooyinkii ugu danbeeyey la arkayey isaga oo u kala dabqaadaya Addis iyo Qaahira, inkasta oo dhan lagu tiriyo.
Ra’iisul wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed, ayaa shalay ka degay magaalada Asmara, halkaas oo uu wadahadal kula yeelan doono madaxweyne Afwerki. Madaxweyne Isaias Afwerki (bidix) oo magaalada Asmara ku soo dhaweynaya Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya
Ujeedka ugu weyn ee shirka halkaas ka dhici doona ayaa loo malaynayaa howl la xiriirta muranka webiga Niil ee waddammo badan oo reer galbeed cillinkiisa heli waayeen.
“Eritrea in dhinaca Masar ay u janjeerto ayaa la qorayaa, weliba wargeysyada Carabtu ay sheegayaan. Tan labaad Eritrea aad iyo aad ayey ugu tiirsantahay mucaawanada ay dalalka Khaliijku bixiyaan, kuwaas oo haatan aad u dabataagan Masar,” ayuu yiri Faysal Rooble oo ka faalooda arrimaha Geeska Afrika.
Falanqeeyayaal ayaa u arka biyaha niilka, miino muddaysan, oo mar uun Geeska Afrika ku qarxi doonta. Dalal badan oo Reer Galbeed ah oo uu Maraykanku ugu tun weyn yahay ayaa dhawr jeer isku deyey inay xal u helaan muranka, hasayeeshee dedaalladaas ayaanan Wax natiijo ah laga gaarin.
Haddaba Eritrea ayaa si ay uga soo dhalaasho dowrkaas dhexdhexaadinta ayaa waxaa lagama maarmaan ah inay raacdo dhabbihii hore ay dalalka caalamku u jeexeen, sida uu ku doodayo Faysal Rooble: “Dhexdhexaadintu ma dhaafayso wixii adduunka kale ay ku taliyeen oo ah in Itoobiya ay tanaasul ay sameyso, biya-xireenkana ay Masar kala tashato.”
Mowqifka dalalka Carabka ee muranka Niil
Inta badan dalalka xubnaha ka ah ururka Jaamacadda Carabta ayaa Masar ku garab istaagay khilaafka ku saabsan biyo xireenka Wabiga Niil ee kala dhaxeeya Itoobiya, balse waxaa go’aankaas kasoo hor jeestay Soomaaliya, Jabuuti iyo Qadar.
Shir aan caadi ahayn oo ay wasiirrada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay Jaamacadda Carabta ku yeesheen qaab muuqaal ah ayaa lagu soo bandhigay qodob dhigaya in Masar lagu taageero mowqifka ay ku diiddan tahay in la buuxiyo biyo xireenka ay Itoobiya ka sameysatay Wabiga Niil.
Qaraar laga soo saaray gabagabadii kulankaas ayaa lagu sheegay in “amniga biyaha ee Masar iyo Suudaan uu qeyb muhiim ah ka yahay amniga qaran ee dalalka carbeed”.
Qoraalka sawirka,Wabiga adduunka ugu dheer ee Niilka ayaa aad usii biyo yaraynaya
Dhinaca kale, qaraarka Jaamacadda Carabta wuxuu dhigayaa in saddexda dal ee kala ah Masar, Itoobiya iyo Suudaan ay miiska wadahadalka dib ugu laabtaan, iyadoo la eegayo danaha muhiimka ah ee dal walba uu ka leeyahay arrintaas.
Hase ahaatee saddexda waddan ee dhinaca goonida ah ka istaagay, oo ay ku jirto Soomaaliya ayaa sheegay in go’aankaas uusan wax faa’iido ah u lahayn danaha shacabkooda.
Warar ayaa sheegaya in saddexda dal ee ku gacan seyray qaraarkaas ay yeelan doonaan shir gaar ah.
Biyo xireenka Itoobiya, oo ay dhismihiisa ku baxeyso lacag dhan 4 bilyan oo doolar ayaa lagu wadaa in laga dhaliyo koronto awooddeedu ay gaarsiisan tahay ilaa 6,000mw.
Soomaaliya ma waxay la safatay Itoobiya?
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo BBC-da la hadlay ayaa sheegay inay labada dalba saaxiib la yihiin laakiin ay eegayaan danaha gaarka ah ee darisnimada. Axmed Ciise Cawad, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya
“Annaga mowqifkeennu – oo ah nala qabeen dalkalka aan walaalaha nahay ee Itoobiya iyo Qadar -wuxuu ahaa in khilaafka ku saabsan biyo xireenka ay dhiseyso Itoobiya oo ay isku waafaqi la’ yihiin Masaarida iyo Suudaan in lagu dhammeeyo wadahadal. Qaraarka ay Masar soo bandhigtay wuxuu dhigayay in Itoobiya aysan buuxin karin biyo xireenka ilaa laga heshiiyo. Dowladda Itoobiyana heshiis wey oggoshahay laakiin waxay diiddan tahay in waqti looga dilo wadahadal dheeraanaya,” ayuu yiri.
Isagoo sii wata hadalkiisa ayuu sharraxaad ka bixiyay waxa ay Soomaaliya ku kala dooratay Masar iyo Itoobiya.
“Itoobiya daris baan la nahay, saaxiib baan la nahay, sidaas darteedna wixii dhibaato ah oo Itoobiya gaara annagana wuu nasoo gaarayaa. Masarna saaxiib ayaan la nahay, marka Soomaaliya dan uguma jirto khilaaf dalalkaas dhex mara.”